ဆဲရေးရှိက ဆဲအပ်လှသည်….။ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Cultures » ဆဲရေးရှိက ဆဲအပ်လှသည်….။	23
Posted by naywoon ni on Jun 28, 2012 in Cultures, Drama, Essays.., My Dear Diary, Society & Lifestyle | 23 comments
ကျုပ်တို့ ဗမာတွေက ဆဲစရာရှိရင် စာနဲ့ ပေနဲ့ သမိုင်းတွင်အောင် ဆဲတတ်ကလား….။ အောက်က တေးထပ်လေးဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်…။ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲကမှ ထင်ရှားတာလေးရှာဖွေ ပေးလိုက်တာပါ….။ ယူလာတဲ့ လင့်လေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်…။ အချုပ်တန်းဆရာဖေ(တေးထပ်)
ပလူးရပြေးကျို့ ကာ ခွေးသို့ပမာ
ဆရာဖေ ဟာကုန်းဘောင်ခေတ် နှောင်းပိုင်း စာဆိုဦးပုည နဲ့ ခေတ်ပြိုင်ထင်ရှားခဲ့ပြီး မန္တလေးမြို့ ရိုး တောင်ဘက်ကျုံးထိပ် အချုပ်တန်းခေါ် မြင်းကုန်းနှီးတန်းမှာ နေထိုင်တဲ့ အတွက် အချုပ်တန်းဆရာဖေ လို့အမည်တွင်ပါတယ်။သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီး ရှမ်းပြည်ဘက်မှာနေထိုင်ရင်း သင်္ကြန်ပွဲ တစ်ခုမှာ ရေပက်ခံလိုက်ရရာက အပြင်းဖျားပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ဗမာ တွေ ဘာကြောင့်ဆဲသလဲ …။ ဆိုတာကို အဖြေရှာရအောင်ပါ…။ များသောအားဖြင့်ကတော့ ကိုယ့်အမျိုးကို ယ် အားမလိုအားမရဖြစ်လို့ ကောင်းစေချင်လို့ ဆဲတာရှိတယ်….။ နောက် တစ်ခုက ရှေ့က ပို့ မှာပြောခဲ့သလိုပဲ…..။ ဆဲတာဟာ ဆင်းရဲတာနဲ့ ဒွန့်တွဲနေသတဲ့…။ ချမ်းသာတဲ့ သူထက် ဆင်းရဲတဲ့သူကပို ဆဲသတဲ့ …။ ဘာလို့လဲဆို သူတို့ မှာ မကျေနပ်ချက်တွေ အလိုမကျမှုတွေ ပိုဖြစ်လို့တဲ့…။ ကျေနပ်မှုတွေ အလိုကျမှုတွေ များလာရင် လူတွေ ဟ ဆဲတာ လျော့ ကျသွားသတဲ့…။ လူမှန်ရင်တော့ ဆဲတတ်တာချည့်ပါပဲ…။ အနည်းနဲ့ အများကွာမှာပေါ့ …။ ဒါပေမဲ့ ဗမာတွေလောက် ထွင်ထွင် ကျည်ကျည် နဲ့ နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ် မဆဲကြဘူးနဲ့ တူရဲ့….။ ဗမာတွေက ဟာသ မြောက်အောင်လည်း ဆဲတတ်ကြရဲ့….။ ဘာတဲ့ “ ခွေးသား ၀က်မြေး ကြက်ယောက်ဖ” တဲ့…..။
အဲ ပြောချင်တာက ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်း တဲ့ အသုံးအ နှုန်းနဲ့ အဆဲတွေက စာပေထဲမှာတင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်…။ နေ့စဉ်သုံး စကားတွေထဲမှာလည်း ရှိနေပြန်တယ်…။ ဒါကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေတာပဲ…။ ဥပမာ “ မိအေး နှစ်ခါနာ” ဆိုတာမျိုး…..။ “လောဘကြီးတော့ -ီးလောက်ရ” ဆိုတာမျိုး….။
ထားပါ…။ ဒီနေရာမှာ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆ့က ဗမာတွေ ဆဲတာမကြိုက်ဘူး မဆဲစေ့ချင်ဘူးဆိုရင် မဆဲကြရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ….။ ရှေးက ရှိခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာ ဓလေ့ စရိုက်ကို ဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲ….။ ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာ ပြောကြည့်ရအောင်နော်….။ ဗမာလူနေမှု စနစ်ကို ပြောင်းဖို့လိုမလား …။ ကျုပ်ကတော့ လိုမယ်လို့ထင်တာပဲ….။ ကောင်းတာယူ မကောင်းတာ ပယ် လုပ်နေလို့က တော့ ကြာဦးမှာ …။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးတက်မှာမဟုတ်ပေဘူး…။ ဒီတော့ ပိုးထိုးနေတဲ့ သရက်သီး တစ်လုံးလုံး လွှင့်ပစ်ပြီး နောက်တစ်လုံးခွဲစားလိုက်တာက ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲ…။ About naywoon ni
naywoon ni has written 289 post in this blog.
ဘဲဥ says: ကြုံတုံးလေး ဆဲသွားအုံးမှပါ
ငါ့ ……. ခွီးးး
ဟိုကောင် ………. ကြည့်ဒါလား
သေ………….. တွေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1808
Khaing Khaing says: ဆဲတာကမကောင်းဘူး ဒါပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေက ကလေးငယ်လေးတွေကို မဆဲဆဲတတ်အောင်သင်ပေး ကြတယ် ကလေးလေးတွေဆဲရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့ ………. အဲဒီကစတာပါပဲ ……. ကိုနေနော် ပါးစပ်ကမဆဲပေမယ့် ကိုနေပီစီပုံလေးကိုပြင်တင်ထားဦး …….. အခုတော့ ကိုနေကိုမမြင်တာကြာပေ့ါ ….. လကုန်တော့မယ် ပေးဦး ……..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 55
PaLote Tote says: နေ၀န်းနီရေ
အပ်ချုပ်တန်း မှာနေတာလို့မှတ်ဖူးပါတယ် ။ (အချုပ်တန်း မဟုတ်ပါ) ။
ဆဲတာ မှာ မိန်းကလေးတွေက စကားပြောရင် “ဆ” နဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေက “လ” နဲ့ အများဆုံးသုံးတယ် ။
ချစ်စ/ဆရာ says: ဆဲတယ်ဆိုတာကတော့ စကားပြောခြင်းတစ်မျိုးပါဘဲဗျာ
လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ ယဉ်ကျေးခြင်းနဲ့ မယဉ်ကျေးခြင်းလို့ဆိုနိုင်မလားဘဲ
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ခံစားတတ်သလောက် အဓိပ္ပါယ်ရှိမယ်ထင်ပါတယ် ( ထင်တာပါ )
( လိင်တူချစ်သူကြီးကို ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ )
စိတ်တို့ရဲ့ သဘောအရ ဆဲရေးတိုင်းထွာသူဟာ
၄င်းဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းစကားမှာ ၄င်းစိတ်ထားသလောက် ၄င်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
၄င်းလူဟာ ၄င်းဆဲရေးတိုင်းထွာနေတဲ့အချိန်မှာ ၄င်းဒေါသထွက်နေရင် ၄င်းရဲ့စိတ် တော်တော်ပင်ပန်းပြီး
၄င်း ဘာမှမဖြစ်ရင် ၄င်းရဲ့ စိတ်ဟာ ဘာမှဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး
ဒါပေသိ ၄င်းလူကို ဝစီမကောင်းသူဟု လူတို့မှတ်ယူကြမှာပါ
၄င်းလူ၏ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းအကြောင်းမှာ ကြားသူ ဆဲခံရသူဟာ ၄င်းဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းမှာ
ခံစားနိုင်ရင် ခံစားနိုင်သလောက် ခံစားရပြန်ပါရောလား
ရံခါဖြစ်တတ်ပါတယ် ဆဲရေးတိုင်းထွာသူထက် ဆဲရေးတိုင်းထွာခံရသူက ပိုပြီးဒေါသထွက်တတ်ပါတယ်
ဒါက စိတ်တို့၏ သဘောဖက်က နည်းနည်းလေး ဖွင့်ပြတာပါခင်ဗျ
အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်က ပုဂ္ဂိုလ်အနေထားအရ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းကို တုမှီခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီဆိုက်ထဲက ဘယ်လိုမှ မယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အရိုင်းအစိုင်း အုပ်ကြားမျက်ပေါက် ရေမြောကမ်းတင်
လိင်တူချစ်သူအားပေး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဆိုတဲ့ လူရဲ့ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းနှင့်
ဆိုခဲ့ပြီးသလို စာအညွှန်းပါ ဆရာကြီးရဲ့ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းဟာ ဘယ်လိုမှ နှိုင်းယဉ်မထိုက်လှပါဘူး
ဆိုလိုတာက ဟိုက တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွက် ဆဲရေးတိုင်းထွာတာဖြစ်ပြီး
ဆိုခဲ့ပြီးသလို မယဉ်ကျေးတဲ့ အနှီးသတ္တဝါကတော့ မိုက်ရိုင်းခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဖိုးထောင် says: ဆဲတာနဲ့ ပါတ်သက်လို့တော့ ခြုံကြည့်ရင်တော့မကောင်းပါဘူး အများအားဖြင့် ဆဲတဲ့လူကို မိုက်ရိုင်းတယ်လို့ လူ့လောကမှာဆိုကြပါတယ် ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်း ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာပြောဆိုမှုကို မပြုစေလိုလို့ ၃၈ ဖြာမင်္ဂလာထဲမှာတောင်ထည့်ဟောပေးထားသေးတယ် သို့သော်ငြားလည်း အဲဒီအပြုအမူထက်ဆိုးတာကို ကျနော်တို့ရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောပြသွားဘူးပါတယ် သူက နှိုင်းယှဉ်ပြသွားတဲ့သဘောပေါ့
‘ မိုက်ရိုင်းလို့ရတယ် မယုတ်မာနဲ့ ‘ တဲ့ မှတ်သားစရာလေးပါ သူ့ဝသီအရ ဆဲတတ်တာကို သိနားလည်တဲ့ လူတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေက ခွင့်လွှတ်ကြပါတယ် ယုတ်မာတဲ့လူကတော့ ဘယ်လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ကမှခွင့်မလွှတ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်
kai says: မြန်မာဆဲနည်းတွေကို စုဆောင်းပြီး. ဋီကာဖွဲ့နိုင်ရင်ကောင်းမယ်..
ကျုပ်ကတော့.. အောက်တန်းစား ဋီကာလုပ်ဖူးတယ်.. http://mandalaygazette.com/6943/creative-writing
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: သဂျီးပြောတာတွေ စေဒနာနဲ့ကူးလာပြတာနော်..
ချီးဗိုက်။
ချီးဘရိမ်း။
Dirty words word list
A jumble of words with funny and dirt words!
Do you like salt on your rim?
fattoush / fatoush
shooting blanks in the red zone
sloppy beef and wet
soft spot in the crust
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7058
etone says: Itchy bitch ! ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ် .. အဟီး ။
TTNU says: မောင်စိန်ဗိုက်ဗိုက်ရေ…
ကြိုးစားအားထုတ်မှုကတော့ Superb ပါပဲ။
မဆဲရဘူးနော်၊ ဟင်း… လျှာအနာပေါက်တတ်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1290
ရွာစားကျော် says: အမျိုးတွေကို ဆဲချင်တဲ့ အကြောင်းတော့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းသလိုပဲဗျာ..
မန္တလေးမှ နာမှုကူညီ ရေးအသင်းများ စုပေါင်း၍ ရခိုင်ဒေသ ကူညီရန် ဇွန်လ (၂၆) ရက်နေ့ ညနေ(၆)နာရီ(၃၀)မိနစ်တွင် အလှူပစ္စည်း တင်ဆောင်လာသည့် ကားများ လမ်းခရီး အခက်အခဲတွေ့နေသတဲ့….
ငါနဲ့ချည်း ကိုင်တုတ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ငတေမာတဲ့ အမျိုးတွေ
မစ္စတာ တောက်တဲ့ says: ” ကျုပ်တို့ ဗမာတွေက ဆဲစရာရှိရင်
စာနဲ့ ပေနဲ့ သမိုင်းတွင်အောင် ဆဲတတ်ကလား….။ ”
ဒါကို ပိုးစိုးပက်စက် ထောက်ခံပါဒယ် ..
ရာဇဝင် ပြန်လှန်ကြည့်ရင် ရှင်ဘုရင်လည်း ဆဲခဲ့တယ် ..
မှူးကြီးမတ်ရာတွေလည်း ဆဲခဲ့ကြတယ် ..
မိဘုရားတွေလည်း ဆဲကြတာပဲ ..
ဘုန်းကြီးတောင် ဆဲတယ်လို့ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ် ..
(မယုံရင် ဘုန်းကြီးရှေ့ မဟုတ်တာ သွားလုပ်ကြည့်)
ဆဲရတဲ့အကြောင်းကို ရှာကြည့်ရင်တော့ အမျိုးမျိုးပဲ …
ဆဲတယ်ဆိုတာ ဒေါကထွက်လို့မို့ ဆိုပေမယ့် …
တချို့ဆို ရီရီမောမောနဲ့ ဆဲကြတယ် …
ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပဲ …
မောဒယ် .. ဒါပဲ …
မောင်ပေ says: ဂေဇက်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
အပြင်မှာဆိုရင်တော့ ဆဲစရာအကြောင်း တွေ့ကြလို့ရှိရင်
ဒါမှ စိတ်ထဲမှာ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားတာကလား။
Wow says: ဆဲရေးရှိက ဆဲအပ်လှ၏ ဆိုဒေါ့… အခုကစပြီး ဆဲလို့ရဘီပေါ့နော်…
kyaw swar says: ဆဲတာမကောင်းဘူး
ဒါပေမယ့် ဆဲသင့်ရဲ့သားနဲ့မဆဲပဲနေ တာပိုမကောင်းဘူး
ဒါကြောင့် ဆဲစရာရှိရင် ဆဲပါ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 100
thar ag says: ဆဲစရာရှိရင်တော့လဲ ဆဲနေကျတာပဲနော်
mayjuly says: ဆဲ တယ် ဆိုတာကလည်း စိတ်ရဲ့ ထွက်ပေါက်တစ်ခုလို့ ပြောရမယ်…
မကျေနပ်လို့ ဆဲ ပြစ် လိုက် ရင် စိတ်ထဲမှာ နဲနဲ ပေါ့သွားတာပေါ့ ..
မဆဲဘူးဆိုရင် .. လက်ပါ မိသွားမှာဆိုတော့ ..ဆဲတာကမှ တော်အုံးမယ်ထင်တယ် … :P
Phaung Phaung says: mayjuly ပြောတာမှန်တယ်…ထောက်ခံတယ်.။
King of Secrets (Bo Min) says: ကြိုက်တယ်ဗျာ၊ ၁၀ တန်း မှာ အောက် ၂ ကြောင်း ဘဲ သင်ခဲ့ရတာ၊ အခု အပြည့်အစုံဆိုတော့ ကျေးဇူးဗျာ။
သားဦး၊မြေးဦး says: ဆရာနေဝန်းနီခင်များ တဖက် က“လူမျိုးရေးမခွဲခြားလို ပို့ စ်မှာ”ကျနော်ဆဲမိပြန်ပါပီ။
ရွာသူားအားလုံး ဆရာသမားများကို ကန်တော့ပါရဲ့ဗျာ။
အလင်းဆက် says: ဆဲ..ပါဘူးကွယ်….
MaMa says: ဆဲပြီး ပြောမှ ပြီးမြောက်မယ့် ကိစ္စ ရှိမယ် မထင်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်း ဖြစ်စေ။
တပါးသူလည်း နားဝင်ချို(သို့) နားဝင် စေ ဆိုရင် ကောင်းမယ်။
Pitbull says: ဆဲသာဆဲ မင်းဂရုမစိုက်နဲ့ ……………. ငါတို့ကတော့ မင်း…………………….. ကို ဆဲမှာဘဲ
ဟို Gmail ဆိုလား Jailme ဆိုလား ရာပါတယောက် ဆိုထားတဲ့ သီချင်းပါ ………………….
ဦးနေရေ သမီးလဲ ဆဲတာကို အားမပေးဘူးတော့ ဆဲတာက အာညောင်းတယ် ဆွဲတာကမှ.. အလဂါးဆတာ.. ဟီးဟီး ရှောက်တွေးမနေဏဲ့
ဦးနေရဲ့ …. အဆဲမုန်းတဲ့ အသည်းဒုန်း ပစ်
first last says: Oh. Hell, whatagood post.
Comments By Postသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - ရာမညလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - Mobile13 - padonmarဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - ရာမည - Kaung Kin Pyarအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - ဦးကြောင်ကြီး - kyeemiteလူပါး ပုလင်းထိ - ဆူး - Ma Maဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - Kaung Kin Pyar - အလင်း ဆက်နောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Ei Kyipyar - ko pauk mandalayတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - ဦးကြောင်ကြီး - TNAရထား ထွက်တော့ မယ် - Moe Z - padonmarသို့ ချစ်သောဖေဖေ - Myo Thant - အလင်း ဆက်အမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - ရွှေတိုက်စိုး - padauk moeအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - Munetez - Traditional Medicineမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - N@ng Ghi Ghi Joe Zအဟံ ပထမံ - padonmar - padonmarရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - padonmar - Traditional MedicineCongress - ကထူးဆန်း - Traditional Medicineဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - Aung Myat Lin - kyeemiteသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - Mobile13ဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - Mobile13 - မောင် ပေပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - Hnin Ei - Ma Eiအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - TheWinner Getprizeကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - လူကလေး - သူကလေးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - လူကလေး - သူကလေးကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဦးဦးပါလေရာမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ko pauk mandalay - panpanEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities